Thola Ukuqeqeshwa Ngezandla Emkhakheni We-IT ngama-Computer Degrees »Hodges U
Categories: Hlobanisa, Isiqu, Ubuchwepheshe Bekhompyutha, Isayensi yekhompyutha, Okufakiwe, Isiqondisi Esiku-inthanethi, Ubuchwepheshe
Isayensi Yezamakhompiyutha kanye neziqu ze-Computer Information Technology
Ake Siqale Ngezisekelo ... Ngabe Ufuna Isiqu Sezobuchwepheshe bekhompyutha noma Isiqu Sezobuchwepheshe Bekhompyutha? Impendulo ingakumangaza.
Iningi labantu licabanga nge "computer science" njengegama elibanjwayo lamadigri ekhompyutha. Iqiniso ngukuthi, laba bobabili bebengeke bahluke kakhulu. Iziqu zeComputer Science zifunda ngesici “sesayensi” samakhompyutha kanti iziqu zeComputer Information Technology kanye nesisekelo kukulungiselela ukusebenza ngezandla kwi-IT Industry.
Sinikeza amadigri ekhompyutha ngokugxila kokukhethekile:
Ubuchwepheshe Bekhompyutha is ibanga elenziwa ngezifiso elenzelwe ukuhlinzeka abafundi ngeziqu zokusebenza emkhakheni we-IT ojwayelekile ngenkathi uvumela abafundi ukuthi bakhethe izinto ezikhetha ulwazi lwabo, amakhono abo, kanye nesipiliyoni sabo - okubenza babe nempumelelo ngokukhethekile.
Ukuphepha kanye nokuxhumana yiziqu ezinikeza abafundi ithuba lokumba bangene ekuvikelekeni kwe-cyber nakuma-cyberattacks besebenzisa ukulingisa namathuluzi atholakala emsebenzini ukuze baqonde hhayi nje ukuthi ukuhlaselwa kwezokuphepha kwenzeka kanjani, kodwa nokuthi kungazivinjelwa kanjani.
Ukuthuthukiswa kweSofthiwe ingeyabafundi abanentshisekelo ku- izinhlelo futhi ukufaka amakhodi. Leli yibanga eliphelele labafundi abanentshisekelo yokwakha isoftware ye-SAAS, isoftware ehlobene ne-inthanethi (efana nokwakhiwa kwewebhu noma amathuluzi e-e), isoftware yokudlala, noma izinhlelo zokusebenza.
EHodges University, sigxile ezandleni zohlangothi lwe-IT ukukungenisa emakethe yomsebenzi ngokushesha - ngamakhono afanele nezitifiketi ezikhethekile ezifakiwe. (Bheka ngezansi ukuthola imininingwane egcwele ngezinhlelo zethu zeziqu)
Amakolishi Angabizi: I-Online Associate engabizi kumaDigri wezobuchwepheshe bolwazi
Isikhungo seBachelor Degree: I-15 Best Online Bachelor's in Graphic Design ye-2020
Ukubuyekezwa Okuhamba Kakhulu Kwekolishi: Umhlahlandlela WamaKholeji Aku-inthanethi eFlorida
Amakholeji Ahamba Phambili: I-Best Online Bachelor's ku-Computer Programming Izinhlelo ze-2020
Izikole Zamanani Ahamba Phambili: Ama-Degrees Okushibhile Okuhle kakhulu we-Graphic Online
Indawo Yamakhompyutha: Ama-Bachelors angama-20 ahamba phambili kwi-Intanethi ku-Information Technology 2016-2017
Graphic Design Degree Ihabhu: Ama-Bachelor aphezulu we-15 aku-Graphic Design ka-2020
Graphic Design Degree Ihabhu: Iziqu ze-15 eziphezulu kakhulu ezingabizi kakhulu ku-inthanethi ekuthuthukisweni kwewebhu naku-Design 2020
Funda.org: Izinhlelo ezihamba phambili zeBachelor Online ku-Information Technology (IT) Degree Programs
Iziphesheli ze-Great College: Iziphesheli ezihamba phambili ezingama-20 kumakolishi amancane eFlorida
Onobuhlakani: Izinhlelo ezinhle kakhulu ze-Graphic Design Design
State University: Izikole Ezidume Kakhulu Zohlelo lweComputer Graphics Major & Degree
Iziqu ze-Master Best: Izinhlelo eziphezulu eziphezulu ze-25 ze-MIS Degree Online
Izikole ezihamba phambili: Ama-10 Best Online Bachelor's kuma-Computer Programming Programs
Izikole ezihamba phambili: Iziqu ze-Software Best Engineering zeBachelor's
Izikole ezihamba phambili: AmaBachelor Ahamba Phambili Kuhlelo Lwezobunjiniyela bamaKhompyutha
Value Izikole: Izinhlelo ezi-10 eziphezulu kakhulu ezingabizi kakhulu ku-inthanethi ku-Graphic Design 2020
Funda.org: Izinhlelo ezihamba phambili ze-Online Cyber ​​Security Bachelor's Degree
Kuvulwa indlela yabesifazane emikhakheni yezobuchwepheshe yonke indawo!
E-Fisher School of Technology, sikholelwa ukuthi ukufakwa kwabo bonke abantu, kubandakanya nabesifazane nalabo abavela kubantu abangaphansi kwe-STEM, kubalulekile ekukhuleni nasekuqhubekeni ngempumelelo kwenkambu ye-IT.
Kubheke ngale ndlela, izinkampani zobuchwepheshe zesikhathi esizayo zifuna imibono emisha nezintsha esebenza kuwo wonke umuntu. Ngaphandle kokufakwa kwabesifazane abagxile kwezobuchwepheshe ezindimeni zobuholi, ukuthuthukiswa kwemikhiqizo esiyisebenzisa nsuku zonke kuyasilela ekuhlangabezaneni nezidingo zabesifazane abazisebenzisayo.
“Okungaqondakali ngabantu abaningi ukuthi i-computing iyisisekelo sayo yonke imikhakha yeSayensi, Technology, Engineering neMathematics (STEM),” kusho uLanham. EHodges University, iFisher School of Technology inikela ngeziqu ezisiza abafundi ukuthi bathuthukise amakhono adingekayo ukuze babe nomthelela omuhle emikhakheni yezobuchwepheshe yomphakathi wethu webhizinisi.
Kukhonjisiwe ukuthi amantombazane awaphishekeli imisebenzi yezobuchwepheshe ngezinga elifanayo nozakwabo besilisa ngoba abangavezwa yi-computer hardware, isoftware, nokubhala amakhodi besebancane ngokwanele ukuthi baphishekele iziqu zobuchwepheshe bekhompyutha. Esikhundleni sokuza endaweni yasekolishi ngolwazi olufanayo njengabalingani babo, abesifazane bazizwa besemuva futhi bagcina belahla okungaba yindlela enhle kakhulu yomsebenzi.
Izinhlelo Zobuchwepheshe Bekhompyutha
Hlanganisa neSayensi ku-Computer Information Technology
I-AS yethu kwi-Computer Information Technology inikela ngesisekelo esiqinile sokuma kwezinga lokungena emkhakheni we-IT noma ukuthola indawo okugxilwe kuyo njengoba uqhubeka neziqu zakho zeBachelor level.
Kwangathi kungalungiselela abafundi ububanzi obubanzi bolwazi kuzo zonke izindawo ezethulwayo zensimu yezobuchwepheshe.
Kwangathi kungalungiselela abafundi ideski losizo lokungena ezingeni lokungena noma uhlobo lokusekela lwezikhundla ze-IT kunoma yimuphi umkhakha.
I-Java Programming Nginikeza ukuqonda okubalulekile kohlelo, olungasiza abafundi njengoba beqhubeka nomkhakha abawukhethile.
Izifundo ze-A + Hardware I no-II zifaka ukufinyelela kokuqukethwe okwenziwe ngokwezifiso kweLabSim okwethula izitshudeni ngemisebenzi eminingi yokulingisa engasetshenziswa emakilasini azayo nasezindaweni zomhlaba wangempela.
Izitshudeni zikhetha insimu yazo eziyithandayo futhi zikhethe izinqumo ngokuya ngokukhetha kwazo okukhethekile. I-General Computer Information Technologies, Programming and Coding, noma izifundo zeCybersecurity kanye ne-Networking zinganikeza isisekelo esidingekayo ukuphishekela iziqu ze-bachelor's degree.
NJENGOBA ku-CIT Sequence
Imisebenzi Yokungena Ezingeni le-IT
Isiqu seSayensi ku-Computer Information Technology
I-BS yethu ku-Computer Information Technology ivumela abafundi ukuthi benze ngezifiso amadigri abo ngokususelwa kumakhono ngamanye nangothando lwensimu ye-IT.
Izifundo zokubhala zePowershell zinganikeza abafundi ithuba eliyingqayizivele lokuthola isipiliyoni sokuphathwa kwenethiwekhi yomhlaba wangempela esidingekayo ukudala nokusebenzisa izikripthi ezingasetshenziswa kabusha ezindaweni ezahlukahlukene zenethiwekhi ukuqedela imisebenzi ephindaphindayo neyinkimbinkimbi enhlanganweni yanoma yisiphi isayizi.
Thola izitifiketi zakho zemboni kanye neziqu ngasikhathi sinye. Izitifiketi zomkhakha ezitholakalayo zifaka phakathi i-MOS, CompTIA A +, CompTIA Net +, CCNA, MCP, CompTIA Security +, & CompTIA Linux +.
Khetha indlela ye-Computer Information Technology uma ufuna i-degree eguquguqukayo evumelana nemisebenzi ehlukahlukene egxile kubuchwepheshe kunoma yiluphi uhlobo lwenhlangano.
Izinketho zivumela abafundi ukuthi bahlanganise ukuphepha kwe-cyber, inethiwekhi, ukuphathwa kwedatha, noma amakhono wokuhlela isoftware ukuklama idigri elenza ngokwezifiso ulwazi lokufunda ukusekela izinhloso eziphelele zomfundi ngamunye.
Izitshudeni zingafunda ukuthi zingabhidlizwa kanjani izinkinga zebhizinisi ukuthola isisombululo esifanele se-IT, bese zakha indlela esebenzayo yenqubo yokuqalisa ngokuphelele, kufaka phakathi ukuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nokuhlelwa kokugcinwa kokugcinwa okuqhubekayo.
BS ngokulandelana kwe-CIT
Imisebenzi Yezobuchwepheshe Bolwazi
Izinhlelo zeCybersecurity kanye ne-Networking Degree
Isiqu seSayensi ku-Cybersecurity naku-Networking
I-BS yethu ku-Cybersecurity kanye ne-Networking ihanjiswa nge-interactive, hands-on methodology (kusetshenziswa amathuluzi angempela atholakala endaweni yokusebenza) ukuthola izixazululo zenethiwekhi, nokuthola nokuvikela i-cyber okungakunika amakhono adingekayo kusukela ngosuku lokuqala.
Abafundi banikezwa ithuba lokufunda ukusebenzisa amandla we-PowerShell endaweni ye-Windows ukuze bakwazi ukusebenzisa imisebenzi yokuphatha inethiwekhi kuyo yonke inhlangano ngenqubo yokubhala.
IHodges U inikela ngemishini ebonakalayo yabafundi ukusetha ukumiswa okuhlukahlukene kwenethiwekhi ukubhala, ukuhlola, nokwenza imibhalo ye-PowerShell, engasiza ekwakheni nasekucazululeni amakhono abo ngaphambi kokungena emsebenzini.
Funda izixazululo ezinqenqemeni zokuphepha kwamanje kwe-cyber nezinkinga zenethiwekhi ezivela kubaphathi abanokuhlangenwe nakho okusebenzayo kwensimu. Lalela njengoba uprofesa wakho, osebenzela i-ejensi kahulumeni, enikeza izibonelo ezingakholeki, zokuphila kwangempela zokuhlaselwa kwe-cyber futhi angachazi nje ukuthi ukuhlaselwa kwaphazanyiswa kanjani, kodwa nokuthi kungavinjelwa kanjani. Lolu lwazi luhumushela ekuqeqesheni ukuthi ungayithola kanjani kangcono futhi uyivikele inhlangano ekuhlaselweni yi-cyberattack, nokuthi ingahlelwa kanjani futhi igcwaliswe kanjani inhlawulo yenhlangano ngemuva kokuhlaselwa okuyimpumelelo kunhlangano.
Izitshudeni zinganweba amakhono azo okuphepha esifundweni sethu se-Ethical Hacking. Abafundi bacwiliswa endaweni yokuhlangana lapho bakhonjiswa khona ukuthi bangaskena kanjani, bahlole, bagenge, futhi bavikele amasistimu abo. Indawo enzima yelabhu ifundela umfundi ngamunye ulwazi olunzulu nolwazi olwenziwayo ngezinhlelo zamanje zokuphepha ezibalulekile.
Amakilasi ethu e-IT asebenza kunethiwekhi ezimele evumela abafundi ukuthi basebenzise isoftware yokulingisa ukuxhumana, ukuthola ukuphepha, kanye nokuhlaziywa kwezehlakalo. Leli thuba lokulingisa lingasiza abafundi ukuthi bathuthukise futhi baqinise ukuphepha kwe-cyber kanye namakhono okuxhumana ngokuvumela ukuba basebenzise izivivinyo futhi balingise izimo zomhlaba wangempela, ukufunda ngesikhathi sangempela okugcwalisa izindlela zendabuko zokufundisa.
Abafundi bazoba nethuba lokwenza amanethiwekhi ahlukahlukene anama-server nezindawo zokusebenza, bafunde ukusebenzisa noma iyiphi inethiwekhi ngosayizi ngempumelelo nangendlela efanele, futhi bafunde ukuthola, ukuxazulula, nokuvimbela izinhlobo ezahlukahlukene zezinsongo zokuphepha kuzinsizakusebenza zenethiwekhi.
I-BS ku-Cybersecurity & Networking Sequence
ImiSebenzi Yomklami Wekhompyutha
Izinhlelo Zokuthuthuka Kwesoftware (Ukufaka Amakhodi kanye noHlelo Lwekhompyutha)
Isiqu seSayensi ekuThuthukisweni kweSoftware
I-BS yethu ekuThuthukisweni kweSoftware ingakulungiselela ukuklama okuthile okuhle. Noma ngabe unentshisekelo yokwakha isoftware, ukuthuthukiswa okususelwa kuwebhu, noma umhlaba wokudlala - sikusibekele.
I-Java Programming II ingahlinzeka abafundi ngemikhuba yokusebenzisana esezingeni eliphakeme. Izitshudeni zingathola amakhono ekubhaleni ikhodi eyinkimbinkimbi yesoftware ekhulisa isikhathi sokwenza nendawo yokugcina lapho uhlelo lwesoftware ludinga ukwenza kahle nokusebenza kahle.
Simboza ububanzi bezinkinga zokuphepha ezivame ukutholakala ezinhlelweni zesoftware futhi abafundi abangakulungela ukwakha ikhodi eqondile, esebenza kahle futhi evikelekile.
Thola ukuqonda kokuthi ungawasebenzisa kanjani amakhono owafundayo ezindaweni zangempela ze-IT ezivela kosolwazi abasebenza kulo mkhakha.
Kubafundi abaphishekela ukugembula, sinikeza ukufundiswa kusingeniso ku-Game Programming kanye nokuThuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula kanye ne-Internet Application Programming and Databases.
Kubafundi abanentshisekelo ekuthuthukisweni kwesoftware esuselwa kuwebhu, sinikela ngemfundo kuJava Programming, Programming Concepts II, Web Design I, Izicelo Zokuhlelwa Kwenhlangano Yezenhlalo Nezobuchwepheshe Bokubambisana, i-e-Commerce, Ukuthuthukiswa Kokusebenza Kweselula, kanye ne-Internet Application Programming kanye Nemininingwane.
Abafundi banethuba lokufunda izilimi zokufaka amakhodi njengengxenye yohlelo lwabo lweziqu, kungadingeki ukuthi kube nekamu lokuqalisa. IHodges U ihlinzeka ngezifundo kwiJava, Python, XML / Java (ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
Sebenzisa amakhono okufaka amakhodi owafundile kumaphrojekthi afana nokwakha uhlelo lokusebenza lwe-Android, ukwenza izinhlelo zesoftware usebenzisa iJava, noma ukudala umdlalo oyisisekelo ofaka amafayela womsindo, amamephu wethayela, kanye nesizinda sokugingqika ukuthuthukisa ulwazi jikelele lomdlali.
Funda ukuthi ungalinganisa kanjani amakhono akho okubhala ngokuhlangana nokwakha umuzwa omuhle womsebenzisi jikelele.
BS ekuThuthukisweni kweSoftware
Imisebenzi Yokuthuthukisa Isoftware
Yini Ebeka AmaHodges U Ngaphandle?
Uma ufuna ukutadisha amadigri ahlobene nekhompyutha, mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi kungani kufanele uye eHodges U. Izinhlelo zethu zenzelwe ngokukhethekile ukukulungiselela ukuletha imiphumela kumaphrojekthi ahlobene ne-IT.
Izifundo ze-IT ezihlobene nomkhakha ezenzelwe ukwakha ulwazi olubalulekile njengoba abafundi beqhubeka ngezindlela zabo ezikhethiwe.
Ukufunda okusebenzisana kungumongo wesifundo ngasinye se-IT. IHodges U ithatha ukufunda okusebenzayo kuya ezingeni elisha lonke ngokunikela ngamalebhu okulingisa, imishini ebonakalayo, kanye namanethiwekhi wangempela abafundi ukuhlola amakhono abo nolwazi ngaphambi kokuba bacelwe ukuthi basebenze endaweni yokusebenza.
Wonke umfundi wethulwa kuzisekelo zohlelo usebenzisa iJava futhi ufunda ukusebenzisa imiqondo yohlelo ukuqedela imisebenzi eyisisekelo yokuthuthukisa isoftware. Abafundi bathola ithuba lokubhala izinhlelo ezilula ezibonisa ukuhlangana kokusebenza kwesoftware ngokufakwa kwenethiwekhi kanye nezinqubo zokuphepha.
Ukuphathwa kwephrojekthi kuhlanganiswe kuzo zonke izinhlelo ze-IT degree ukuze kuthuthukiswe amakhono azosiza abafundi ukuphatha amaphrojekthi we-IT amaningi ngasikhathi sinye atholakala ezindaweni zokusebenza zanamuhla.
Izitshudeni zingathatha izivivinyo zesitifiketi semboni eHodges U ngezinga elincishisiwe lesitshudeni, kungaba njengesitifiketi esizimele noma njengengxenye yesifundo sabo. Lapho beqeda iziqu zabo, abafundi bangathola nezitifiketi eziqondene namakhono ngaphezu kwediploma yeziqu zabo.
Isiqu ngasinye se-BS Information Technology siphela ngezifundo zeSystem Analysis & Solutions Architecture. Lesi sifundo sinikeza abafundi ithuba lokukhombisa ukuqonda kwabo ukuthi bangaziguqula kanjani izidingo zebhizinisi ngalo lonke uhlelo lokuthuthukisa impilo ukuze kukhiqizwe uhlelo oluphothuliwe lokuqalisa uhlelo oluhlanganisiwe lolwazi ngaphakathi kwenhlangano, ngaleyo ndlela lunikeze ubufakazi bokuthi umfundi ukulungele ukuthatha emsebenzini we-IT ngaphakathi kwenkambu yabo ebekiwe.